Soomaaliya oo ku guuleysatay Dacwada Badda - Ceelhuur Online
Home > Uncategorized > Soomaaliya oo ku guuleysatay Dacwada Badda
February 2, 2017 admin616
Maxkamadda Caalamiga ah ee Cadaaladda ee fadhigeedu yahay magaalada Hague, ayaa aqbashay inay dhageysato dacwadda Soomaaliya ay gudbisay ee ku saabsan muranka badda ee Soomaaliya iyo kenya u dhaxeeysa.
Maxkamadda waxay meesha ka saartay diidmada Kenya.
Labada dalba waxay sheeganayaan lahaanshaha dhul badeed bedkiisu uu gaarayo 142 kun oo km oo labo jibbaaran, waxayna sidaasi darteed Sooaaliya ka dalbatay maxkamadda inay xadeyso xaduudda badda ee labada dal si waafaqsan xeerarka caalamiga ah.
Waxay sheegeen in hadii la raaco qaabka ay Kenya rabto ay qaadan karto ku dhawaad 20 sano, labada dalna ay dani ugu jirto in si dhakhse leh loo soo afjaro murankan. Labada dalba waxay sheeganayaan lahaanshaha dhul badeed bedkiisu uu gaarayo 142 kun oo km oo labo jibbaaran, waxayna sidaasi darteed Soomaaliya ka dalbatay maxkamadda inay xadeyso xaduudda badda ee labada dal si waafaqsan xeerarka caalamiga ah.
Frank Lampard Oo Gabi Ahaanba Soo Gabagabeyay Waayihiisa Ciyaareed